जवानीमा हाई हाई, मर्ने बेलामा कोही न कोही ! चर्चित कलाकारको दुखद निधन - Onlinenews Global
July 22, 2021 laxmiLeaveaComment on जवानीमा हाई हाई, मर्ने बेलामा कोही न कोही ! चर्चित कलाकारको दुखद निधन
भारतका प्रख्यात गीतकार अभिलाषले लामो समयको अस्वस्थता पछि आइतबार मुम्बईमा संसार छाडे । उनी फोक्सोको क्यान्सरसँग जुधिरहेका थिए नै विगत १० महिनादेखि आर्थिक संकटमा पनि थिए । उनलाई दर्शक तथा श्रोताले ‘इतनी शक्ति हमें देना दाता’ गीतबाट चिन्छन् ।
त्यसो त अभिलाष भन्दा अघि पनि धेरै कलाकारहरुले आर्थिक रुपले कंगाल भएरै जीवन त्यागे । एक समय यी कलाकारको नाम र दाम दुबै थियो । तर मृत्युको समयमा उनीहरु आर्थिक रुपमा विपन्न बने ।
अभिनेता महेश आनन्दले फिल्म ‘शहंशाह’, ‘मजबूर’, ‘स्वर्ग’, ‘थानेदार’, ‘विश्वात्मा’, ‘गुमराह’, ‘खुद्दार’, ‘बेताज बादशाह’, ‘विजेता’ र ‘कुरुक्षेत्र’ जस्ता फिल्ममा अभिनय गरेका थिए । उनी सन् २०१९ को फेब्रुअरी ९ मा आफ्नो घरमा मृत भेटिएका थिए । महेशलाई लामो समयदेखि कुनै पनि फिल्मबाट काम मिलिरहेको थिएन । त्यही कारण उनी डिप्रे सनमा थिए । आर्थिक संकटकै कारण उनी एक्लै बस्दथे ।
‘पाकिजा’ जस्तो फिल्ममा अभिनय गरेकी गीता कपूरको निधन सन् २०१८ मे २६ मा भएको थियो । गीताको अन्तिम समय निकै कष्टकर बितेको थियो । उनका सन्तानले पनि उनको हेरचाह गरेका थिएनन । गीताको कोरियोग्राफर छोरा उनलाई अस्पतालमा छोडेर भागेका थिए । अशोक पण्डित र अन्य बलिउड अभिनेताहरुले गीताको उपचार खर्च उठाइरहेका थिए ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
३ वटा टाउको भएका शिशुको जन्म, भगवानको आगमन भन्दै दर्शन र पूजा गर्नेको घुइचो !
दुवै मृगौला फेल भएकी चम्सुरिलाई कृष्ण कँडेलले भेटेर गरे यतिधेरै सहयोग (भिडियो सहित)
राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रधानसेनापति नियुक्त, ब्राह्मण जातिबाट यी बने पहिलो सेना प्रमुख
August 27, 2021 laxmi
चियासँग जोडिएका यी ६ अफवाहलाई तपाईं पनि मान्नुहुन्छ सही ? थाहा पाउनुहोस् वास्तविकता
August 20, 2021 laxmi
महासागरजत्रो पार्टीमा पौडी खेल्न पुगेन भनेर माधव नेपालले खाल्डो खने : केपी ओली
क्या हुआ करन जोहर के घर डिनर में, की करीना पोहोच गयी हॉस्पिटल..
धनुष और ऐश्वर्या के अलग होने की वजह है पारिवारिक झगड़ा, एक्टर के पिता ने किया तलाक की खबरों को खारिज
करोड़ों रुपयों की मालकिन है ये एक्ट्रेस, जानिए एक फिल्म के लिए कितनी मिलती है फीस
जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर
दसियो को सिर्फ राजकुमारियों की सेवा के लिए ही नहीं भेजा जाता था, ये सब करना पड़ता था राजा को खुश करने लिए…